केसीलाई केही भए, तिम्रो खैरियत छैन सरकार! - राजनीति - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
केसीलाई केही भए, तिम्रो खैरियत छैन सरकार!
सरला गौतम काठमाडौं, मंसिर १५
हेक्का होस् सरकार!! तिम्रा हजार लफडा सल्टाउँदै गर। पहिला डा. केसीको ज्यान बचाऊ।
संसद भत्ता वृद्धिको अपार सफलतापछि सरकार अहिले प्रदेश सीमाङ्कनको गम्भीर कार्यमा व्यस्त छ। कुराउनीको भागबन्डामा कुरा नमिलेको बाँदरको कथा नागरिकको मन मस्तिष्कमा नाचेको छ यतिखेर। रामदेव बाबासँग गलेमा गले मिलाएर आफ्नो अभूतपूर्व दायित्व निभाएका प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भोकै लडिरहेको एक जोगीलाई भेट्ने समय छैन। राज्य बाँडफाँडको कुरा छ नि केन्द्रमा। बिलो त सबलाई चित्त बुझ्ने गरी लगाउनु पर्यो। यता स्वास्थ्य मन्त्रीलाई सत्र दिनमा टाइम निक्ल्यो डा. केसीसम्म पुग्न। हरे!
अर्का ‘क्रान्ति नायक’ बाबुराम भट्टराई नयाँ शक्तिलाई सर्वशक्तिमान बनाउन लागिपरेका छन्। देशको सेवा गर्नु गरेका उनको पनि केसीको कुरामा धेरै चासो देखिन्न। सत्ताको मह चाट्नु नै आफ्नो मुख्य ध्येय भन्ने प्रभावशाली छाप नागरिकमा छोड्न सफल लोकतन्त्रको ‘रक्षक ’ नेपाली कांग्रेसको के कुरा गर्नु? देशमा अमनचयन भयो भने हाम्रै कारणले हुन्छ भन्ने भ्रम पालेका एमालेजनहरू पनि फुर्सदमा छैनन् यतिखेर। यो देशको प्रणाली ठिक गर भनेर पटकपटक भोकै पल्टने एउटा मान्छेलाई टुलुटुलु हेर्दैछन् नेपाली जनता। देशको बेथितिविरुद्ध ज्यानै फाल्ने एउटा मान्छे त छ। अरु कसमा आँखा अड्याउने नेपाली नागरिकले?
निष्पक्ष नागरिक समाज अहिलेका लागि कल्पनाको कुरा छ। देशमा लोकतन्त्र ल्याइयो, यो भन्दा बढी के गर्नु भन्ने भावमा उनीहरू होलिडे मनाइरहेछन्। देशको सेवा ओभरटाइम गरेको भ्रम उनीहरूमा पनि देखिन्छ। दलहरूलाई तह लगाउने नागरिक समाज त कोमामा नै गएको छ। जता जता राजनीतिक दल त्यतै त्यतै स्वाहा! नागरिक समाजको अहिलेको ताजा अवस्था यही त हो। धन्न एउटा डा.केसी थिए र डेमोक्रेसीको खोल ओडेर देश हाँक्नेहरूले कसरी चलाउँछन् देश भनेर जानकारी दिइरहेछन् हामीलाई, आफ्नै ज्यानको मूल्यमा।
केसीसँग आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट मिलेको बखत कुम जोड्न जानेको लर्को नै देखियो। अहिले चामलमा बियाँ टिपेजस्तो गरी सहभाव टिप्नु परिरहेछ। उनको माग ठिक नलागे यो–यो कारणले बेठिक भन्नु पर्यो, ठिक लागे सम्बोधन गर्नु पर्यो। एउटा मान्छेको ज्यानको सवालमा राज्य संचालकहरू चुप बस्न सुहाउँछ? जनताको नाम बेचेर राजनीति गर्नेहरू जनताकै हितमा लड्ने मानिसका लागि नबोली बस्ने, ताजुब छ बा! स्वास्थ्य मन्त्रीलाई किन लाग्यो सत्र दिन केसीसम्म पुग्न। यो देशका मानिसहरूलाई जोड घटाउको राजनीति गर्ने मानिसको खाँचो छैन। खाँचो छ त थिति बसाल्ने जनसेवकहरूको। कस्ले कहाँ क्यालकुलेटर लिएर नाफाघाटा जोडघटाउ गरिरहेछ, आजकालका नागरिक यति नबुझ्ने छैनन्।
जनप्रतिनिधि भनेको केहो? आफ्नो सेवा सुविधाको सवालमा मुख खोलिहाल्ने, नागरिकको सवाल, देशको सवालमा मुखमा ताल्चा लगाएर ढुक्कै बसिदिने। हाम्रा सवालमा चुप बस्ने मानिसहरूको जमातलाई हामीले हाम्रा प्रतिनिधि मान्न खाँचो छैन। डा.केसीबारे मौन बसेर तीर्थ खनियाँ प्रवृत्ति हावी हुन सघाउने मान्छेहरू हाम्रा प्रतिनिधि होइनन्। एउटा बौद्धिक चोरले समाजमा कस्तो संस्कारको बिजारोपण गर्दछ सम्झँदै उदेक लाग्दो कुरा छ। खनियाँ जस्ता मान्छेको लागि केसीको ज्यानको बेवास्ता गरिरहेका एक–एक मान्छेहरू जनताको नजरमा निगरानीमा छन्। हामीलाई कसैले देखेका छैनन् भनेर कसैले नसोचे हुन्छ।
माथिमाथिका राजनीतिक नाराका आवरणले ढाकेर नागरिकका सरोकारका मुद्दा ओझेलमा पार्ने समय अब बिस्तारै सकिँदैछ। बिना उपलब्धि गलाभरि माला भिरेर गाँउगाउँ डुल्नेहरूलाई याद होस्। सरकारको अर्कमण्यताको ढोल पिटेर विरोध गर्ने हैसियत हुनुपर्छ जनप्रतिनिधिमा। आफ्नै भतेरमा आइटम थपेर मात्र बस्ने पनि ‘जनप्रतिनिधि’!! हद हुन्छ नि!
यो देश कसरी चलिरहेछ? किन समयमा विकासका काम हुँदैनन्, किन स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तर कहिले उकालो लाग्दैन? मान्छे किन सामान्य रोग लागेपछि जीवनसँग आश नै मार्न थाल्छन्। औषधि उपचारले ढाड सेकिएर बिरामीका कुरुवाहरू अस्पतालमा किन भोकै बस्छन्। सबै कुरा जनताले याद गरिरहेछन्।
यदि धेरै मनोमानिल्यमा देश चल्दोरहेछ भन्ने पहिला त आँकलन मात्र थियो। केसीको पटकपटकको अनसनले हामीलाई सचित्र देखाइदिएको छ। स्वास्थ र शिक्षा क्षेत्रको स्याम्पल पिक्चर देखाइदिएर उनले अन्य क्षेत्रको अवस्था पनि बुझाएका छन्। जनप्रतिनिधिहरू बुख्याचाको रोलमा भएको बेला, नागरिक समाज कोमामा गएको बेला उनी एक मात्र आड र ढाडस हुन् अहिले। सच्चा अर्थमा जनप्रतिनिधि हुन्। जस्ले आफ्नो सरोकार र मर्मलाई प्रतिनिधित्व गर्छ उही हो नागरिक प्रतिनिधि र अगुवा। उनको यो सत्कर्मलाई फगत लहड र जिद्दी सम्झने कसैको पनि खैरियत हुने छैन। केसी एउटा मान्छेको नाम होइन, युद्धको मानक हो। जो नैतिकताको गान्डीवले लगातार लडिरहेछ। हजारौं अनैतिकहरूको वाणलाई बीचबाटै छिनाल्ने साहसको प्रतीक पनि हो। आफ्नै दाउपेचका खेलाडीहरू कसैमा पनि अहिले नागरिक भरोसा अडिएको छैन। यिनै जोगीमा आफ्ना सारा विश्वास अडाएर उभिएको नेपाली समाजले नै जोगाउनेछ केसीलाई। केसीलाई तलमाथि केही भएमा यहाँ कसैको खैरियत रहने छैन। हेक्का होस् सरकार!! तिम्रा हजार लफडा सल्टाउँदै गर। पहिला डा. केसीको ज्यान बचाऊ।
जस्तै आँधीहुरीमा पनि नैतिकताको बलमा उभिने अटल पहाडजस्तो पागल छ यो देशमा। र त हाम्रो दिमागले अलिकति भएपनि काम गरेको छ।
प्रकाशित १५ मंसिर २०७३, बुधबार | 2016-11-30 15:32:37